Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Kaompaniam-pitaterana an'habakabaka alitalia: hypothèse amin'ny varotra
Ny zotram-piaramanidina alitalia dia amidy tsikelikely, iray isaky ny mandeha. Ny dingana raisina dia ahitàna ilay antsoina hoe Plan B, ny ampahany amin'ny fiaramanidina, miaraka amin'ireo zavatra hafa toa ny fiaraha-miasa amin'ny Parlemanta. Sarotra ny fotoana, lafo ny vidiny ary mihena ny vola miditra. Vakio bebe kokoa amin'ny antsipiriany rehetra.
Mba hanidiana ny dossieran'ny zotram-piaramanidina Alitalia, dia nipoitra ny fitsapana ny fivarotana an-tsokosoko (sy amin'ny fotoana samihafa) an'ny orinasa Italia Italia Trasporti Aereo, ilay Newco ho an'ny daholobe noforonina mba hamerenany indray ilay mpitatitra tricolor.
Ny voalohany dia ny fivarotana ny sampana "aviation" sy ny fanofana ny serivisy fitantanana sy fikojakojana. Avy eo dia tonga ireo sakana roa farany novidiana tao anatin'ny volana manaraka miaraka amin'ny fankatoavan'ny Vaomiera Eraopeana.
Ity ny "drafitra B" izay miasa nandritra ny andro vitsivitsy handresena ny fanoherana ataon'ny Community Antitrust araky ny loharanom-pahefana misy araka ny nohazavaina tamin'i Corriere della Sera.
Ny "drafitra B"
Tsy mbola ny famaritana no tena izy, fa hatramin'ny alatsinainy dia eo amin'ny latabatry ny minisitry ny fampandrosoana ara-toekarena Stefano Patuanelli no tsy maintsy manapa-kevitra ary avy eo manome mandat ny komisiona an'ny Alitalia amin'ny fitantanan-draharaha miavaka, Giuseppe Leogrande.
Nihantona ny fanambarana ampahibemaso tamin'ny martsa lasa teo satria mbola “mihantona” ny orinasa, saingy hanana tombony roa heny ny vahaolana vaovao. Amin'ny lafiny iray, hanafoana ny vokatra tsy ilaina amin'ny fandrarana izany na amin'ny fomba hafa ho an'ny daholobe amin'ny ho avy, ary etsy ankilany dia mamela ny fananan'ny Alitalia hamidy amin'ny orinasa tokana, ITA raha ny marina, hisorohana ny masaka.
Ny ampahany "fiaramanidina"
Raha ny filazan'ny teknisianina - efa miasa amin'ny "plan B" - dia lalana mety izany. Ny varotra mivantana ny sampana "aviation" fotsiny, ohatra, dia hiditra amin'ny lalàna nasionaly sy tsy eropeana, ka hialana amin'ny fidiran'ny Community Antitrust.
Mety hanana tombony lehibe koa io. Io dia ahafahana mihidy ny fananana sarobidy indrindra an'ny kaompaniam-piaramanidina (ny marika, ny kaody manidina, ny slot misy ifandraisany amin'ny voalohany, ny programa mahatoky MilleMiglia) ary mandritra izany dia mamela ny orinasa vaovao hiainga. Tombanan'ny manam-pahaizana fa eo amin'ny 220 tapitrisa Euro ny sampam-piaramanidina.
Ny rantsana roa hafa
Ankoatry ny fivarotana ny ampahany "fiaramanidina", ny fitantanan-draharaha miavaka sy ny ITA dia tokony hanao sonia fifanarahana amin'ny famatsiana serivisy fikojakojana sy fikirakirana. Ny newco, raha fintinina, dia hanofa ireo rantsana roa hafa, raha miasa amin'ny fananganana fandidiana izay mety hahasoa an'i Eropa.
Tsy kisendrasendra izany - nanipika izy ireo avy tany Bruxelles - fa nandritra ny volana maromaro dia tsy nanohitra ny fizarana sidina ny Direktorat Jeneraly ho an'ny fifaninanana ao amin'ny Vaomiera Eoropeana, fa nanazava kosa fa ireo sakana roa hafa - ny fikirakirana sy ny fikojakojana - izay tsy maintsy misy amidy amin'ny alàlan'ny tolotra am-bahoaka.
Fa tery ny fotoana. Ny "Plan B" dia tsy maintsy atao alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana fahavaratra izay manomboka amin'ny faran'ny volana martsa ny fitaterana an-habakabaka. Ny alitalia amin'ny fitantanan-draharaha miavaka dia tsy mahazaka ny fomba fivarotana amin'ny ankapobeny napetraky ny volavolan-dalàna naato tamin'ny volana martsa, satria mety haharitra roa ambin'ny folo volana. Ny kaomisera Leogrande dia miandry ny famantarana avy amin'ny governemanta italiana momba ny karazam-pitiavana mba hanohizana ireo dingana ara-dalàna.
Ny vola lany isam-bolana
Maika ny komisionera manidy ny dosie. Ny talata tolakandro dia nanazava tamin'ny sendika izy fa ny fividianana vola dia farafaharatsiny farafahakeliny, ny vola miditra dia mitohy mihena hatrany amin'ny 90% noho ny COVID-19, ary mijanona ny fandaniana. Amin'ireo 73 tapitrisa euro onitra voaray tamin'ny faran'ny taona noho ny fahasimbana nihatra tamin'ny valanaretina pesta, manodidina ny 18 tapitrisa no nandany tamin'ny karama volana desambra ary 10 tapitrisa tamin'ny fahatelo ambin'ny folo, tsy lazaina intsony ny vidin'ny asa (fanofana fiaramanidina, solika, fiantohana, fikojakojana sns).
Raha tsy tonga ny 77 tapitrisa hafa hanonitra ny simba nandritra ny roa volana farany tamin'ny 2020, dia hisy ny vola ampy handoavana ny karaman'ny Janoary fotsiny.
Fifanandrinana amin'i Eropa
Mandritra izany fotoana izany dia andrasana ny valandresaka an-tsary amin'ny zoma eo amin'ireo teknisianina ao amin'ny EU Antitrust, Italia Air Transport (ITA), ary ny Ministeran'ny Toekarena (tompon'andraikitra amin'ny newco) hanomboka hamaly ny ampahan'ny fanontaniana napetraky ny Direktorat Jeneraly ho an'ny fifaninanana momba ny ny drafitra indostrialy amin'ny fanombohana ny orinasa.
Ny sasany amin'ireo fanontaniana, voamarika, dia misy fampahalalana diso ary, noho izany, voavaha mora foana, fa ny sasany kosa mandalina amin'ny antsipiriany kokoa ary mila andro maromaro tsy hamaly fotsiny fa mba hisorohana ihany koa ny fampahalalana saro-pady toy izany ny fifaninanana.
Ao amin'ny Parliament
Eo amin'ny lafiny italianina, ny fandinihana ny drafitra indostrialy ITA ao amin'ny Komitin'ny Asa vaventy an'ny Antenimieran-doholona miaraka amin'ny tatitra nataon'i Giulia Lupo (M5S) dia nanomboka ny talata 12 janoary teo. Tsy maintsy maneho hevitra ny komitin'ny loholona sy ny trano. ao anatin'ny 30 andro amin'ny drafi-pandraharahana. Ny asa dia nanomboka ny andro taorian'ny fihainoana tsy ara-potoana (sy tsiambaratelo) ny fitantanana ambony an'ny newco, ny filoha Francesco Caio, ary ny tale jeneraly ary ny tale jeneraly Fabio Lazzerini. Ny fihainoana vaovao koa dia kasaina hatao amin'ny herinandro ho avy.
Ny Travel amerikana dia midera ny drafitra fanampiana vonjy maika an'ny filoha voafidy an'i Biden